Soosaarida Cas ee Khamiirka ah (RYRE) Kaabisyada- Wisdompowder
Kaabista cas ee rooga casaanka ah: Faa'iidooyinka, Qaddarka, iyo Waxyeellada dhinaca
Waa maxay Rice Roodhida Cas-cas
Soosaar khamiir cas ah (RYRE) waxaa la sameeyaa marka nooc cayiman oo caaryo ah oo loo yaqaan Monascus purpureus rootida bariiska. Bariiska ayaa loo rogay casaan guduud ah wuxuuna soo saaraa maaddo kiimiko ah oo loo yaqaan monacolin K oo leh qiimo daawo. RYRE waxay qayb ka ahayd TCM (dawada dhaqanka Shiinaha) in ka badan 10 qarni. Waqtigaan, waxaa loo suuq geeyay kaabis iyo cunno caafimaad oo adduunka oo dhan ah.
Sidee Rice khamiirka cas loo soo saaraa shaqada
Hzy-CoA reductase enzyme waa enzyme kaas oo u beddeley molecule loo yaqaan HMG-CoA mevalonate. Xarunta Mevalonate waa xayndaab dhisme oo muhiim u ah 1000-kun ee molikulal kale, sida kolestarol. Monacolin K wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah lovastatin taas oo ku xirneyd HMG-CoA reductase xannibaadda wax soo saarka kolestaroolka.
Mevalonate waxaa sidoo kale loo rogi karaa unugyo muhiim ah sida coenzyme Q10 oo u dhaqma sida antioxidant-ka.
RYRE waxaa ku jira iskudhisyo kale marka lagu daro monacolin K. Waxay sidoo kale leedahay qaab dhameystiran oo aad u adag marka la barbardhigo lovastatin. Sida laga soo xigtay saynisyahannada, qaybaha kale ee bariiska khamiirka cas waxay yareyn karaan halista waxyeellooyinka ay keento monacolin K. sida daciifnimada murqaha.
Bariiska khamiirka cas ma soosaarayaa dawo ama kabitaan?
Soosaarida khamiirka casaanka ah waxaa loo kala saari karaa labadaba daroogo iyo kaabis. Tani waa sababta oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu mihiimsan ee soosaarka bariiska khamiirka cas waa monacolin K. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa lovastatin kaas oo ah qaybta firfircoon ee dawada loo qoro ee loo yaqaan Mevacor. Marka, RYRE hal gacan waa dheeri ah oo gacan ka geysata yareynta kolestaroolka halka dhinaca kale, soo saaraha daroogada Mevacor ay sheeganeyso inay leedahay xuquuqda lahaanshaha astaamaha lovastatin.
Waxsoosaarka lovastatin ee bariiska khamiirka cas waxaa sidoo kale loo kala saaraa dawada dawo ee FDA. Taasi waa sababta RYRE loogu wareerinaayo daroogo ahaan iyo kaabis labadaba.
Faa'iidooyinka Soosaarida Cas ee Casaanka ah
Hoos waxaa looga hadlay arrimaha hoose casaanka khamiirka cas ee bariiska:
Bariiska khamiirka cas wuxuu hoos u dhigayaa kolestarol
Heerka sare ee kolestaroolka xun waa xaalad caafimaad oo daran oo laxiriira buurnida, caabbinta insulin-ta sonkorowga, istaroogga, dhiig karka, iyo wadna qabadka. Mid ka mid ah habka ugu waxtarka badan ee loo xakameeyo heerka kolestaroolka xun oo jidhkaaga looga ilaaliyo caqabadahaas caafimaad ayaa ah inaad qaadato cunto caafimaad leh iyo qaab nololeed firfircoon. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin heerarka sare ee kolestaroolka xun iyada oo aan loo eegin qaadista tallaabooyinkan.
Bariiska khamiirka cas ee laga soosaaray kolestarolka xakameynaya saameynta ayaa ka dhalata awoodda uu u leeyahay inuu kordhiyo HDL (kolestaroolka wanaagsan) dhiigga isla markaana hoos u dhigo triglycerides iyo LDL (kolesteroolka xun). Soo saarista bariiska khamiirka cas waxay sidoo kale horjoogsataa kor u qaadista miisaanka oo haysaa heerarka caadiga ah ee leptin iyo enzymes beerka.
Dhowr baaritaan oo ay ku lug lahaayeen ku dhawaad ​​8,000 kaqeybgaleyaal ah, dadka qaadanaya kaabista soodhada leh ee rootida cas ayaa hoos u dhigay LDL (kolesteroolka xun) iyo guud ahaan kolesteroolka. Sidoo kale wax dhaawac ah kama soo gaadhin shaqada kalyaha ama beerka.
Bariiska khamiirka Cas-ka ah Soosaarida Lowers Cadaadiska
Cudurku waa jawaab-celin caam ah oo ka timid xasaanaddeenna oo loogu talagalay in laga ilaaliyo jirkeenna waxyaabaha alaabada shisheeye ah iyo infekshannada degdegga ah.
Cudurka mudada dheer ayaa si kastaba ha ahaatee la rumeysan yahay inuu sababayo xaalado daba dheeraada sida wadno xanuun, kaadi macaan, iyo kansar. Cilmi baaris ayaa muujineysa qaadashada casaanka khamiirka cas (RYRE) laga yaabaa inay kaa caawiyaan yareynta caabuqa isla markaana aad u wanaajiso caafimaadka muddada dheer ka wanaagsan.
Tusaale ahaan, cilmi baaris la xiriirta 50 qof oo qaba xanuunka dheef-shiid kiimikaadka ayaa cadeeyay in qaadashada khamiirka bariiska khafiifka ah iyo soosaarka saytuunka ay hoos u dhacday heerarka walwalka "oxidative stress" kaasoo ah sababta ugu weyn ee keenta caabuqa dabadheer illaa 20 boqolkiiba.
Sidoo kale, hal daraasad xayawaan ah ayaa ogaatay in jiirka oo leh waxyeelo kelyaha ah oo lagu quudin jiray budada khamiirka cas ee budada laga soosaaray ay hoos u dhigtay heerarka borotiinada gaarka ah ee la xidhiidha caabuqa.
Soosaarida Roogga Casaanka ah ayaa leh sifooyin Anticancer ah
Cadeyn qaar ka mid ah daraasadaha xayawaanada iyo unugyada ayaa cadeynaya in bariiska khamiirka soodhaca leh laga yaabo inuu gacan ka geysto yareynta faafitaanka iyo koritaanka unugyada kansarka. Hal baaris ayaa soo jeedisay in siinta jiirka qaba kansarka qanjirka 'sokud cas' budada budada ah ay yareysay mugga burada marka loo eego kooxda xakamaynta. …
Baadhitaan-tuubbo-baadhitaan ayaa sidoo kale lagu cadeeyay in isticmaalka bariiska khamiirka cas ee budada laga sameeyo si loogu daaweeyo unugyada kansarka ay hoos u dhigtay koritaanka unugyada kansarka illaa xad ka weyn lovastatin.
Soosaarida khamiirka casaanka ah waxay wanaajisaa Caafimaadka Lafta
Hal daraasad oo ku lug leh jiirarka, bariiska khamiirka cas ee budada laga soosaaray ayaa yareysay lumitaanka lafaha ee jiirarka osteoporosis. Jiirarka bariiska khamiirka cas leh waxay lahaayeen unugyo ka caafimaad roon iyo cufnaanta macdanta lafaha ee ka badan meesha loo yaqaan 'placebo'.
Soosaarista khamiirka casaanka ah waxay kordhisaa muujinta hiddo-wadaha ee BMP2, taasoo muhiim u ah bogsashada lafaha jajaban.
Qiyaasta Casiirka Bariiska khamiirka cas
Xusuusnow in cadadka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'monacolin' ay ku kala duwanaan karto waxyaabaha ka soo baxa bariiska khamiirka cas. Tani waa sababta oo ah waxaa jira dhowr nooc oo khamiir ah oo khamiir ah oo noocyo kala duwan oo halsano ah ayaa loo adeegsadaa. Daraasad lagu sameeyay cuntooyinka rooti khamiirka cas ee kala duwan ayaa shaaca ka qaaday in maadada monacolin ay u dhexeyso eber illaa 0.58 boqolkiiba.
In kasta oo daraasado kaladuwan ay soo jeediyeen qadar khamiir ah oo laga soosaaray bariiska, runti ma sheegi kartid in sumadda aad isticmaaleyso ay yeelanayso maadada monacolin ku filan. Sidaa darteed waa lagama maarmaan in marwalba la hubiyo nuxurka monacolin ee kaabista ka hor inta aan go'aan laga gaarin waxa qiyaasta bariiska khamiirka cas si ay u isticmaalaan.
TCM (Dawada Shiinaha ee Dhaqan ahaan), qiyaasta bariiska khamiirka cas ee lagu taliyey way noqon kartaa mid sare. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha qaarkood waxay isticmaaleen bariis khamiir cas laga soo qaatay 600 mg oo qiyaas ah afar jeer maalintii. Daraasadaha kale waxay kaloo kugula talinayaan qaadista bariiska khamiirka cas ah 1200 mg laba jeer maalintii.
Bariiska Khamiirka Cas ee Cilladaha Dhinacyada
Hoos waxaa looga wada hadlay dhibaatooyinka ka dhasha khamiirka bariiska cas;
Dad badan, bariiska khamiirka gaduudan guud ahaan waa aamin marka afka laga qaato si aad u wanaagsan ilaa 4 sano iyo 6 bilood. Tani waxay waafaqsantahay Xarumaha Caafimaadka Qaranka (NIH).
Lovastatin waxaa laga helaa alaabada kala duwan ee bariiska khamiirka cas. Xaddiga aad u sarreeya ee soosaarka ayaa kiciya waxyeelo kala duwan oo khamiir bariis ah sida dhaawaca muruqyada iyo dhaawaca beerka iyo kelyaha. Lovastatin oo ka xor bariis khamiir cas leh ayaa laga yaabaa inuu muujiyo waxyeelooyin la mid ah.
Citrinin sidoo kale waxaa ku jiri kara bariiska khamiirka guduudan marka si khaldan loo kariyo. Citrinin waa maado sun ah oo waxyeelo u geysan karta kilyaha. Dhibaatooyinka kale ee bariiska khamiirka cas waxaa ka mid noqon kara laab xanuun, madax xanuun iyo calool xanuun.
Jumlada Cas ee Caan Bixinta Isdhaxgalka Daroogada
Dawooyinka hoos u dhiga kolestaroolka
Ilaa iyo inta dhakhtarku kuu qorayo, waa inaadan cunin bariis khamiir ah oo ay weheliso daawooyinka hoos u dhigaya kolesteroolka. Bariiska khamiirka cas wuxuu xoojin karaa saameynta daawooyinkaan. Tani waxay ka dhigeysaa halista dhaawaca beerka inuu sare u kaco. Haddii ay dhacdo inaad kujirto statin ama daroogo kale oo loogu talagalay yareynta kolestarol, la tasho takhtarkaaga intaadan qaadan bariiska khamiirka cas.
Heerarka CoQ10 waxaa hoos loogu dhigi karaa statins. CoQ10 si weyn muhiim ugu ah caafimaadka muruqyada iyo wadnaha. Waxay kaloo ka caawisaa soo saarista tamarta. La'aanta CoQ10 ku filan waxay u horseedi kartaa daal, murqo xanuun, dhaawac iyo xanuun. Intaa waxaa dheer, bariiska khamiirka cas wuxuu yareeyaa qaddarka CoQ10 ee jirka ku jira. Haddii ay dhacdo inaad jeceshahay inaad qaadato CoQ10 oo aad wali isticmaaleyso walxaha bariiska khamiirka cas, si naxariis leh ula tasho dhakhtarkaaga.
Kaabista cas oo casaan ah oo khamiir ah
Kaabisyo ay ku jiraan bariis khamiir casaan ah ayaa muddo dheer lagu iibin jiray Mareykanka. Waxay yareeyaan kolestaroolka iyo dufanka kale ee ku jira xididdada dhiigga ee aadanaha. Sanadihii ugu dambeeyay ee macluumaadka la heli karay waa 2008 iyo 2009. Wixii cunto dheeraad ah Bariis khamiir cas ah ayaa qiyaastii lagu iibin jiray $ 20 milyan sanad walba. Sida ku xusan Xog-ururinta Wareysiga Caafimaadka Qaranka ee sanadkii 2007, 1.8 milyan jawaab-bixiyeyaal dhammaantood Mareykan ah ayaa adeegsaday kolesteroolka yareynta caafimaadka.
Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad taxaddar muujiso marka aad iibsaneyso kaabahan maxaa yeelay qaar ka mid ah alaabada badanaa ay ka yimaadaan kuwa iibiyeyaasha aan sharciga aheyn wax ammaan ah ma leh. Qaar ka mid ah kaabayaashaan ayaa xitaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo wasakhoobayaal ah oo waxyeello leh.
Bariiska khamiirka cas meesha laga iibsado
Haddii aad rabto inaad iibsato kareemka bariiska khafiifka ah ee ugu wanaagsan, ku dadaal si taxadar leh internetka oo raadso shirkad leh sanooyin badan oo waayo-aragnimo ah soo-saarka kaabayaasha dhirta. Raadi a shirkadda kaas oo si weyn u maal galiyay soo iibsashada qalabka wax soo saarka ee casriga ah.
Wada-aasaase, hoggaanka asaasiga ah ee maamulka shirkadda; PhD ayaa laga helay Jaamacadda Fudan ee kimistariga dabiiciga ah. In ka badan sagaal sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan cilmiga dabiiciga ah ee kiimikada kiimikada. Khibrad qani ah oo ku saabsan kiimikada isku-dhafan, kiimikada daawada iyo isku-dhafka gaarka ah iyo maaraynta mashruuca.
Zhao SP, Lu ZL, et al. Xuezhikang, oo ah soo saarista kolestaroolka, wuxuu yareeyaa dhacdooyinka wadnaha iyo bukaanka nooca 2aad ee bukaanka sonkorowga ee qaba cudurka wadnaha: daraasadda koox hoosaadka ee bukaannada qaba nooca 2aad ee sonkorowga ah ee daraasadda ka hortagga cudurada wadnaha ee Shiinaha (CCSPS). J Cardiovasc Pharmacol. 2007 Feb; 49 (2): 81-84.
Peng D, Fong A, Pelt AV (2017). "Cilmi-baaris asal ah: Saameynta Kaabashka Bariiska Khamiirka Cas ee Heerarka Kalastaroolka ee Dadka Waaweyn". Am J Nurs. 117 (8): 46-54. .
Wang J, Lu Z, Chi J, Wang W, Su M, Kou W, et al. Tijaabada kiliinikada Multicenter ee saamaynta hoos udhaca dhiiga ee Monascus purpureus (khamiirka cas) diyaarinta bariiska daawada Shiinaha. Curr Ther Res. 1997; 58 (12): 964-978.
1.Waa Maxay Soosaarida Bariiska Khamiirka Cas
2.Sidee Loo Shaqeeyaa Bariiska Khamiirka Casaanka
3.Ma Bariis khamiir cas ah ayaa laga soo saaraa maandooriyaha ama kaabis?
Faa'iidooyinka laga soosaaray Bariiska Khamiirka Casaanka ah
5. Qiyaasta Soosaarida Rice Khamiirka
6. Bariiska Khamiirka Cas ee Soo Saaraha Saameynada
Bariiska Khamiirka Casaanka ah ee lagala baxo Isdhexgalka Daroogada
8.Kordhinta Cunnada Bariiska Khamiiska Casaanka ah
9.Reed khamiir laga soosaaray bariiska meesha laga iibsado
2021 Magnesium L-threonate ee loogu talagalay Soo Celinta Maskaxda Dib-u-dhiska Nootropic-ka ugu Wanaagsan
Pterostilbene Vs Resveratrol: Kee Kee u fiican Caafimaadkaaga?
Anandamide (AEA): Waxkastoo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato
Ku saabsan Wisdompowder
WISEPOWDER wuxuu diiradda saarayaa cilmi baarista, waxsoosaarka iyo hal abuurka waxyaabaha ka kooban nafaqada nafaqada leh ee nafaqada leh. Waxaan nahay soo-saareyaal ku xeel dheer nafaqeynta iyo soo-saare kiimikada dawooyinka, kaabayaasha nafaqada iyo alaabada kimikooyinka.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN): Faa'iidooyinka, Qiyaasta, Dheerida, Cilmi baarista
Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC): Kaabista Ugu Fiican ee Dhismaha Jirka
Dude: Ma samaynayno wax sheegasho ah oo ku saabsan alaabooyinka lagu iibiyo degelkan. Ma jiro wax macluumaad ah oo laga bixiyay degelkan oo ay qiimeeyeen FDA ama MHRA. Macluumaad kasta oo lagu bixiyo websaydhkan waxaa loo bixiyaa sida ugu fiican ee aan ka ogaanno loomana jeedin inuu beddelo talooyinka xirfadlayaal caafimaad oo takhasus leh. Markhaati kasta ama dib u eegis wax soo saar ah oo ay bixiyaan macaamiisheenu ma ahan aragtiyaha wisepowder.com waana inaan loo qaadan talo ahaan ama xaqiiqo ahaan. Xuquuqda daabacaadda © WISEPOWDER Inc.